iCSA incoma amaMomentum Proteas ngomqhudelwano wawo wendebe yomhlaba ongakhohlakali
i-Cricket South Africa (CSA) ihalalisele iqembu lamaMomentum Proteas esifazane ngomqhudelwano wabo omangazile futhi oqophe umlando wendebe yomhlaba ephele ngokubamba umoya e-Bristol namhlanje ngesikhathi behlulwa kwi-semi-final bedlala neqembu lasekhaya i-England ngama-wicket amabili ngebhola lokugcina lesithathu lomdlalo.
“Eminyakeni embalwa edlulile sasingeke siphuphe ngokusondela kangaka, kodwa ngokwenza njalo, kuphula inhliziyo ukuhlulwa eqenjini futhi wonke umuntu obasekelile kumqhudelwano,” kuphawula iCSA Chief Executive, u-Haroon Lorgat. “Kodwa, siziqhenya kakhulu ngalokhu okutholwe iqembu eminyakeni edlulile futhi ikakhulukazi kwindebe yomhlaba. Babambe imicabango yezihlwelwe emhlabeni wonke futhi lokhu kubonakale emisakazweni yezintatheli.”
“Ukukhula okukhona kwiqembu lamaMomentum Proteas kusho ukuthi bangabuyela ekhaya beziqhenya futhi manje bangabheka ekubeni iqembu elihamba phambili emhlabeni. Iningi labadlali bethu bancane okusho ukuthi singabheka ekusasene elizochaza.”
"Ukapteni wethu omncane, uDane van Niekerk, umqeqeshi, u-Hilton Moreeng nabo bonke abadlali kanye nabaphethe, badinga ukubongwa."
"Ukugxatha kuleminyaka emibili edlulile ibimihle futhi umklomelo omkhulu kumsebenzi owenziwe ukwenza iqembu lethu liphumelele. Ukwesekelwa iqembu labaxhasi, uMomentum, kumele babongwe.
“Siphinde sibonge isihlangene nabo abaveza imidlalo, u-SuperSport, njengokuvezwa kwayoyonke imidlalo yethu kuphakamise isithunzi sekhilikithi yabesifazane kakhulu futhi kwaphakamisa nabadlali bethu besifazane ukuthi babe amagama adumile.”
AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando AmaProteas ashaya i-England, abeka udaba olukhulu nge-series Abaphosela amaProteas balungisela ukulwa okunzima AmaProteas abekela i-England umphumela omkhulu u-Luus ubheka okuhle ngaphambi kwe-semi-final yamaProteas esifazane uMorris uphendula isicelo sakapteni Australia iqhubeka nokungahlulwa ibhekene ne-South Africa AmaProteas abesifazana alungele umdlalo ne-Australia Uthi uDu Plessis amaProteas ‘azovivinywa isimilo’ uMoreeng ujabuliswa okunqotshwe amaProteas abesifazane okwamanje uVan Niekerk no-Ismail bayaqhakaza njengoba amaProteas esifazane afinyelela kuma-semi-final endebe yomhlaba